प्रदेशस्तरीय बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण समन्वय समिति गठन – Sulsule
सुलसुले २०७७ कात्तिक २५ गते १४:०४ मा प्रकाशित
समितिको बैठकले बर्डफ्लु नियन्त्रण विधेयक, २०६४ (चौथो संशोधन) लाई आवश्यक संशोधनका लागि पशु सेवा विभाग र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका अध्यक्ष वैद्यले बर्डफ्लुले मानव स्वास्थ्यमा धेरै असर गर्ने हुँदा यसलाई देखापर्ने बित्तिकै नियन्त्रण गरिनुपर्ने राससलाई बताए । बर्डफ्लुले कुनै पनि बेलामा समस्या पर्न सक्ने भएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौँडाका निर्देशक डा. रामप्रकाश प्रधानले हालसम्म नेपालमा बर्डफ्लुपीडित किसानहरुका लागि रु. २३ करोडभन्दा बढी राहत वितरण गरिसकिएको जानकारी दिए ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारीमा खत्री
अपी पावर लिमिटेडले हकप्रद सेयर जारी गर्ने
सिद्धार्थ बैंकद्वारा १ करोड ४ लाख रुपैयाँ सहयोग
प्रभु बैंकको खुद नाफा ४४ प्रतिशतले बढ्यो